HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 1-AUG-2020
Saturday August 01, 2020 - 12:01:10 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo shacabka u diray hambalyada munaasabadda Ciidda Carafo Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee Ciidda Carafo Sanadka 1441 Hijriga. Mada xw
Madaxweyne Farmaajo oo shacabka u diray hambalyada munaasabadda Ciidda Carafo Madaxweynaha JFS Md.Maxamed C/hi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed munaasabadda barakaysan ee Ciidda Carafo Sanadka 1441 Hijriga. Mada xweynaha ayaa tilmaamay mudnaanta gaarka ah ay leeyihiin maalmahan bar akeysan ee bisha Carafo oo Astaan u ah isu-naxariisasha da,ilaalinta danta guud iyo mid nimada dadka muslimiinta ah. "Maalmahan barakaysan ee bisha Carrafo waa maalmo ku weyn diinteenna iyo dhaqanke enna, waa maalmihii gudashada waajibaadka Xajka, iyada oo ay tahay in aan badino Alle ba riga, is-cafinta iyo sadaqada". Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ugu ba aqay dhammaan dadkeenna Soomaaliyeed in ay istaakuleeyaan oo garab istaagaan dadke enna danyarta ah, si dhammaanteen aynu u dareenno farxadda ciidda. "Munaasabaddan farxadda Ciidda Carrafo waxaan ku boorrinayaa muwaadin kasta inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeenna ta baaleysan, agoonta, dadka barakacayaasha ah iyo dariska danyarta ah oo xuquuq weyn ku leh qooys kasta." Sidoo kale, Madaxweynuhu waxa uu si ga ar ah ugu hambalyeeyay munaasabaddan bar akaysan geesiyaasheenna Ciidamada Qalab ka Sida,isaga oo bogaadiyey dadaalka muuq da ee ay ku xaqiijiyeen amniga iyo nabadgely ada shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo waxa uu Alle uga bar yey shacabka Soomaaliyeed iyo Muslimiinta daafaha adduunka ku nool ee u dabbaaldega ya munaasabadda Ciiddan caafimaad, horum ar, nabad iyo barwaaqo.—DHAMMAAD--
Shirka Golaha Wasiirada oo Shalay lagu an sixiyay xubno ka mid noqonaya Golaha Addeegga Garsoorka
Shir ay yeesheen Golaha Wasiirrada JFS ayaa lagu meel mariyay shanta xubnood ee ba nnaanka ka imaanaya oo ka mid noqonaya gol aha adeegga garsoorka dalka.
Xubnaha goluhu ansixiyay ayaa kala ah Ca bdulqaadir Sh.Ismaaciil Aw-xaashi, Cali Maxa muud Xasan (Sheekh Cali Wajiis), Cabdullaahi Cali Cismaan, Cabdiraxmaan Maxamed Axm ed (Cadaani) iyo Ifraax Maxamuud Cumar
shirka oo uu guddoomiyay sii hayaha R/Wa saaraha dalka, Md.Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sidoo kale lagu ansixiyay sideed xubnood oo kamid ah 9-ka Xubnood ee Maamulka Hey ’adda Batroolka Soomaaliyeed.
Xubnaha maamulka Hey’adda Batroolka So maliyed ee goluhu meel mariyay ayaa kala ah:
1.Ibraahim Cali Xuseen (Guddoomiye)
2.Caa’isho Cusmaan Axmed (Gud/ku-xigeen),
3.Ibraahim Axmed Leyte (Xubin),
4.Cabdulqaadir Aadan Maxamuud (Xubin),
Ibraahim Cabdulqaadir Maxamed, (Xubin),
5.Axmed Xaaji Cabdi (Xubin),
6.Cabdixaafid Cali Dirir (Xubin) iyo
7.Mahad Maxamed Sh. Xasan (Xubin).
G/Wasiirada kulankooda Shalay ay yeesheen
Dowladda Soomaaliya oo Shaacisay xilliga la furayo duulimaadyada caalamiga ah
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay dhawaan dib u fureyso duulimaadyada Ca alamiga ah oo markii hore loo joojiyay sababo la xiriira Cudurka Coronavirus oo kiisas kamid ah laga helay dalkaas.
Wasiirka Gaadiidka dalka Maxamed C/hi Salaad Oomaar ayaa sheegay in 3da bisha Agoosto dib loo furi doono duulimaadyadda Caalamiga ah.
Wasiirka waxaa uu hadalkiisa intasi ku dar ay in dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu hoos u dhacay tan iyo markii ay jooji yeen duulmaadyada Caalami ga,hayeeshee markii ay dib u furaan ay diyaariyeen goobo looga baaro dadka garoonka kasoo dego COVID-19.
19-kii Maarso ayaa la joojiyay dhammaan duullimaadyadii caalamiga ahaa ee tagi jiray garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee M/Mu qdisho, taasoo iyana qeyb ka ahayd dadaalla da lagu xakameysano fayraska sababay cudur ka safmarka ah.
Qoorqoor oo la kulmay Madasha Xisbiyad da Qaran
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Madaxweynihi hore Md. Sh.Shariif Sh. Ahmed iyo Madaxweynihi hore Md.Xasn Sh.Maxamu ud ayaa xarunta Madasha Xisbiya da Qaran ku soo dhaweeyey Mada xweynaha Galmudug Md.Ax.C.Kaariye Qoo Qoor. kulanka oo ah mid gaar ah ayaa diira dda la gu saarayaa xaaladda Siyaasadeed, mareynta marxaladda kala guurka ee Dalka iyo dhaqan gelinta heshiiskii Dhuusamareeb.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa kala hadlay Madaxda Xisbiyadda Qaran inay kasoo galaan Shirka looga hadlaayo Arrimaha doorashooyin ka ee dhawaan ka dhici doonta M/ Dhuusam areeb. Waa kulankii ugu horeyay ee dhexmara Madasha Xisbiyadda Qaran iyo Madaxweyna ha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye tan iyo markii la doortay.
Wariye Cabdicasiis Gurbiye oo Shalay Xab siga laga sii daayay
Ka dib markii Maxkamadda G/Banaadir ay Arbacadii lix bilood oo xarig ah iyo shan milyan oo Shilling Somali ku xukuntay Wariye Cabdic asiis Axmed Gurbiye ayaa kee ntay in isla shal ayba xabsiga loo taxaabo.
Xukunka Maxkamadda wux u u ka dambeeyay, markii sida la sheegay Wariyaha lagu helay faafin warar been abuur ah.
Garsoorka Maxkamadda G/Banaadir ayaa sheegay in Wariyaha uu iibsan karo lixda bilo od ee lagu xukumay, taasoo sahashay in Wari yaha uu 24 saac ka dib ka soo baxo xabsiga, dibna u helo xoriyadiisa.
Maxkamadeynta Wariyaha waxay 2dii bilo od ee ugu dambeysay ka socotay Maxkamad da G/Banaadir. Wariyaha oo markii hore loo he ystay in uu warar been abuur ahi ka faafiyay Villa Somalia ayuu si layaab lihi uu kiiskiisu isu gu bedelay inuu been abuurkaasi ka sameey ay Xafiiska Xeer Ilaalinta. Cabdicasiis Axmed Gurbiye, Tafaftiraha Ra dio Goobjoog ayaa bi shii April lagu xiray M/ Muqdisho, xilli loo hayst ay in warar been abuur ahi uu ka faafiyay Xaf iiska Madaxweynaha, ink astoo markii dambe damaanad lagu soo sii da ayay, illaa iyo inta ay maxkamadeyntiisa ka soo geba-gaboobe yso.
Ururada Saxaafadda ee dalka ka hawlgala ayaa si kulul u cambaareeyay lixda bilood iyo shanta milyan ee ganaaxa ee lagu xukumay Cabdicasiis Axmed Gurbiye.
Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay aa ku dhalleeceeyay Villa Somalia inay caburin xoog lihi ku hayso Warbaahinta gaarka loo lee yahay iyo Wariye-yaashaba.
Dad badani ayay layaab gelisay wejiga kale ee uu yeeshay kiiskii loo haystay Wariye Gurb iye,waxayna dadku ku macneeyeen mid ay Vi lla Somalia isaga sii jeedineyso indhaha hay’a daha xuquuqda aadanaha.
Sheekh Shariif oo bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay Munaasabadda Ciidul Adxada.
Guddoomiyaha Madasha Xibiyada qaran ahna Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sh.Axmed ayaa bulshada Soomaaliye edugu hambalyeeyay maalinta 1aad ee Ciidul Adxada.
Sh.Shariif ayaa ugu baaqay bulshada inay fa rxadda iyo is ku marxabeyntooda la wadaa gaan eheladooda iyaga oo ilaalinaya caafimad ka guud maaddaama uu jiro caabuqa Covid19, waxana bul shada uu ku boorriyay inay qa ataan talooyinka caafimaadka ee hay’adaha caafimaadka ay soo jeediyeen.
Dhanka kale Guud ahaan dalka ayaa Shalay waxaa looga dabbaal dagay munaasabadda Ciidul Adxaaga oo maamnta ay tahay maalin teda 1aad, waxaana gobalada dalka iyo M/Mu qdisho ee Caasimadda dalka si weyn looga dareemay farxadda ciidda
Madaxii Warbaahinta Xafiiska Ra’iisul Was aaraha oo shaqada ka tagay
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay xafiiska R/wasaaraha ayaa sheegaya in Agaa simhihii warbaahinta iyo xiriirka bulshada xafiis ka R/wasaaraha ayaa Shalay is casilay.
Calinuur Salaad oo ahaa agaasimaha warfa afinta iyo xiriirka bulshada xafiiska Ra’iisulwa saaraha, lana aaminsan yahay inuu kamid ahaa mas’uuliyiinta ugu dhowaa Xasan Cali Khey re ayaa xilkan hayay muddadii 2da sano ahayd ee la soo dha afay.
Qoraal faahfaahsan oo iscasilaaddiisa ku lif aaqnaa ayuu ku sheegay in isbedel ku yimid ar agtida xukuumadda dartiis uu shaqada uga tagay. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa qorshe yneysa in xafiiska warfaafinta ra’iisulwasaara ha lagu biiriyo kan madaxtooyada, si looga hor tago in ra’iisulwasaaraha cusub uu yeesho xiri ir bulsho oo toos ah.
Waxaa la filayaa inay shaqada ka tagaan la taliyayaashii ku dhowaa R/Wasaarihii hore, ka dib markii shaqada laga ceyriyay xoghayihii xafiiska.
Afhayeenka madaxweyne Farmaajo "Bee sha caalamka hadeey qof maalgashaneys ay qofka wuu tagay hadii ay DFS taagaraye ene”
Afhayeenka madaxtooyada dalka Abdinur Mohamed Ahmed oo Xalay ka qeybgalayey dood ay BBC da qabatay ayaa si cad uga jaw aabay eedeymihi maalmahan ay beesha caal amka so saareysay ee ku aadanaa in dalku si galayo qalalaase siyaasadeed kadib tu uritaan kii uu Baarlamaanka tuur ay R/wasaarihi dalka Xasan Cali Kheyre Abdinur waxa u sheegay in beesha ca alamka haddii ay maalgashaneysay qof oo si da muuqata uu ula jeeday Raísal was aare Kheyre aysan mico weyn laheyn taage radaas balse haddii ay taagareyeen hay´daha dastuur iga ay shaqeynayan hayádaa iyo mada xeynihi dalka ee magacaabay R/wasaaraha.
Mar wax laga weydiiyey sharciyada loo adeegsaday saaristii kheyre iney qalad aheyd waxuu sheegay in barlamaanka ay garden go áankaas madaxweynuhuna goáankaas uu ku taageray oo uusan lug kale ku laheyn.
Afhayeenka waxu ku nuuxnuuxsaday in Doorashada waqtigeeda ay ku dhaceyso Dhuu samarebna la aadayo sida ballant tahay si lo si ambaqaado Hawlaha Geedi socodka Doorashada dalka
Soomaali u socotay Mogadishu oo loo diid ay inay ka dhoofaan Sweden
Waxaa magaalada Stockholm ka bixi lahaa soomaali lagu qiyaasay 50 meeyo oo Ku soo socdeen Mogadishu ayaa Waxaa loo diiday in ay diyaarada raacaan maadaama shirkada Tur kish Airland oo ay sheeg tay ama lagu wargel iyey inaysan soo qaadi karin Soomaalida aan wadanin baasaboorka Soomaaliya ama aan wadanin warqad casummaad ah oo ka timid hay’adaha dowlada Soomaaliya.
Dadkaas oo aad u careysan ayaa soo bu uxiyey goobta tikidka laga fiiriyo dadka markey dhoofaayaan, waxa aysan fahaxsaneen Saba bta ay arintaan ay u sameyneyso dowladda Soomaaliya.
waxaad halkan ka daawan kartaa qof me eshaas joogto oo warbixintaan kasoo duuban sida ay wax u dhaceen noo fahfaahinaayo.
Axmed Madoobe "Dhaqaalaha Soomaaliya oo dhutinayay ayuu Covid-19 sii nugleyay”
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Ax med Maxamed Islaam oo khudbad jeediyay munaasabadda Ciidda Carafo awgeed ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay la daalaa-dhac eyso 2caqabadood oo xooggan oo kala ah xanuunka Covid-19 iyo ammaanka oo liita meelo ka mid ah dalka.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la qaato talada saraakiisha caafimaa dka ee looga hortagayo xanuunka. Waxa uuna intaa ku daray in la dagaallankiisa uu sii nug leeyay dhaqaalaha dalka oo horayba u jilicsa naa.
Waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaliye ed, in qof kasta uu mas’uuliyad gaar ah oo xanuunkan lagu xakameynayo uu qaato, si ay u fududaan in lasoo celiyo adeegyadii dartii loo xayiray.
Dhinaca kale waxa uu Madoobe ka hadlay howl-gal ciidamada ammaanka Jubbaland uu tilmaamay iney wadeen maalmihii lasoo dhaaf ay, isagoo ugu horreyn shacabka maamulkaas ku nool uga mahadceliyay wada shaqeynta ay la sameeyeen ciidamada nabad-gelyada, waxa uu isagoo sii hadlayay uu sheegay in howl-gal ladii ugu dembeeyay lagusoo qabtay maleeshi yaad iyo wax-yaabaha qarxa oo sida uu qeex ay la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo.
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo aan Shalay fagaare lagu ciidin
Dowlad Deegaanka Soomaalida ee Itoo biya ayaanan Shalay fagaare looga tukan saal adda cidul Adxa balse waxaa takbiirta laga qaa dayay masaajidda.
Itoobiya waxaa lagu soo rogay xayiraadaha looga hortagayo fiditaanka feyraska Corona, waxaana kamid ah in la mamnuu cay goobaha isu imaantinka Musl imiinta caal amka ayaa salaa da ciida carafo gudanaya balse cii da sanadkaan waxaa baddalay oo waji kale u yeelay Fayraska Corona maada ma aan salaa da loo oogi karin sidii markii hore loo tukan jir ay iyadoo guud ahaan waxyaabo badan la xaddiday fayraska Corona aawgii.
Odayaasha dhaqanka oo dalbaday in la sii daayo Cabdimanaan Yuusuf
Odayaasha Dhaqanka Beelaha Soo maaliyeed oo Shalay kulan isugu yimid M/Muq disho ayaa sharcidarro ku tilmaamay xarigga Cabdimanaan Yuusuf Maxamed Guddoomiya ha Guud ee Astaan Cable, uu muddo 15 cisho ugu xiran yahay magaalada Hargaysa.
Kulankaan oo ay ka soo qabgaleen oday aal gaaraya 30 oday dha qameed oo isugu jira Ug aasyo, Salaaddiin, Wab arro, Imaamyo, Nabadd oono, Garaadyo iyo cuq aal kale ayaa sheegay in Cabdimanaan uu u xiray shaqsiyaad shaar ma amul huwanaya oo damac gaar ahi uga jiro in ay hantidiisa dhacaan, waxay carabka ku dhif teen Ku Xigeenka nabadsugidda Soomaaliland Faysal Guhaad uu si shaqsi u xirtay isagoo ay wehliyaan rag ka tirsan beesha Madaxweyna ha Soomaaliland.
"C/manaan waa nin aqoonyahan Soomaali yeed oo hal abuur leh, waxaan aaminsanahay inuusan wax dambi ah ka gelin dadka iyo maa mulka Soomaaliland toona, balse la doonayo in xoolihiisa lagu xalaalaysto iyadoo loogu mar marsiyoonayo inay qaraabo yihiin mas’uul ka ti rsan dowladda Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri qoraal laga soo saaray shirkooda jaraa’id.
Waxayna intaa ku dareen inaysan marn aba aqbali doonin damacaas qaldan oo shaqsi yaad gaar ahi ku doonayaan burburinta shirk adda Astaan Cable oo ay hanti ku wada leeyihi in ganacsato ka soo jeedda dhammaan beela ha Soomaaliyeed oo ay ku jiraan ganacsato ka soo jeedda Somaliland.
Odayaasha Dhaqanka Beelaha Soomaaliye ed ayaa xusay in falkaas lagu xiray Cabdi manaan uu horseedi karo inuu kala shaki ku kala abuuro ganacsatad Soomaaliyeed ee sida xorta ah uga kala ganacsada magaalooyinka Soomaaliyeed, iyagoon u baqayn naftooda iyo maalkooda.
"Marqaati uma baahna in ganacatada Somaliland ee ka ganacsata Koonfurta Soo maaliya inay Sharaf iyo magacba ku haystaan Muqdisho iyo magaalooyinka kaleba, mana qa baan welwel ku saabsan naftooda iyo hantodo oda” ayuu yiri Ugaas Cali Xaashi Ugaas Ax med Nuur oo ka mid ahaa odayaashii goobta ka hadlay, wuxuuna ka dalbaday maamulka Somaliland gaar ahaan Madaxweyne Muuse Biixi in Cabdimanaan xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo.
Odayaasha Dhaqanka Beelaha Soomaa liyeed waxay farriin gaar ah u direen Waxgara da iyo Odayaasha Dhaqanka beelaha Soomaa liland oo ay ka codsadeen inay arrinta Cab dimanaan soo farogeliyaan, oo aysan yarays an si ganacsiga Soomaaliyeed aan xuduud loo kala yeelin.
Cabdimanaan Yuusuf Guddoomiha Guud ee Shirkadda Astaan Cable waxaa goor hab een ah oo ku beegnayd 17kii bishan July xoog ku kaxaystay ciidan hubaysay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen nabadsidda Soomaali land, ilaa iyo haddana lama oga dambiga lagu haysto.
Odayaashii Dhaqanka ee Shalay ka qaybg alay shirkii jaraa’id waxaa ka mid ahaa:
Ugaas Cali Xaashi Ugaas Axmed Nuur
Ugaas Maxamed Bashiir Ugaas Xasan
Ugaas Bashiir Ereg
Ugaas Cali Ugaas Xasan
Ugaas Shire Ugaas Warsame
Nabaddoon Max’ed Xuseen Axmed
Nabaddoon Beddel Jamac Xirsi
Nabaddoon Cabditoox Yare
Nabaddoon Hilowle Macllin Yacquub
Nabaddoon Max’ed C/llahi Goosaar
Islow Cismaan Sheekh Xasan
Garaad Xasan Garaad Max’ud Garaad Cagay
Suldaan Mahdi C/risaaq
Suldaan C/llaahi Waamo iyo Odayaal kale.
Somaliland oo Turkiga kala hadleysa saba bta meesha looga saaray ergaygii Turkiga u qaabilsanaa wadahalada DFS & Somaliland.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madax weynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu Wasiirkiisa Arrimaha Dibedda Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) u diray dalka Turk iga. Wasiir Faratoon oo dhawaan gaaray Waddanka Turkiga ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato masuuliyiin ka tirsan wasaaradda Arrimaha dibedda ee Turkiga, waxaana la filayaa inay Dawladda Turkigu ay Wasiirka kala hadasho Shirkii Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee ay Jabuuti marti-gelisay.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku dara yaan in dawladda Turkigu ay Wasiirka kala ha dasho Warar muddooyinkii u dambeeyay ay Warbaahintu baahiyeen, kaasi oo sheegayay in Masar doonayso in Saldhig Millateri laga siiyo Somaliland, iyadoo la ogyahay in Masar iyo Turkigu ay si weyn isku khilaafsan yihiin Arrimaha dalka Liibiya.
Socdaalkan Wasiir Faratoon ayaa ku soo aadaya, iyadoo ay muuqato in isbeddellada iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda Gobolka iyo Nawaaxigiisu ay saamaysay Siya asadda Arrimaha dibedda ee Somaliland.
Xasan Sheekh oo sheegay in uusan isbede lin mowqifka doorashooyinka ee Madasha Xisbiyada
Guddoomiyaha Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horuma UPD ahna Madaxweynihii 8 JFS Xasan Sh.Maxamuud ayaa si faah faahsan u ga warbixiyey kulan dhawaan dhexmaray Gud doonka G/shacabka iyo Hogaanka Madasha Xisbiyada Qaran kaas oo qabsoomay 28 bishan.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uusan jirin wax ajende siyaasadeed ah oo Guddoonka G/shacabku u waday Madasha Xi sbiyada Qaran sidoo kale ay san jirin wax ajende ah oo Madashu ay u dhiibtay Gu ddoonka Golaha shacabka.
Xasan Sh.Maxamud ayaa yiri "waxaan rabaa inaan faah faahiyo kulankii dhawaan ay madashu la yeelatay guddoonka G/shacabka kaas oo dad badan ay ii soo we ydiyeen siyaabo kala duwan walaalayaal wax aan rabaa idin xaqiijiyo in aysan jirin wax fariin ah oo uu noo siday Guddoonka annaguna aan an u dhiibin wax fariin ah”
"Guddoonka G/Shacabku MQ ayey ka mid yihiin madaxduna wey kulmi karaan weyna wa datashan karaan balse ma jrin wax gaar ah oo annaga iyo Guddoonku aan u kulannay saba btoo ah horay ayaan sidaan oo kale u kulmi jir nay” ayuu yiri” Xassan Shiekh Maxamuud.
Md.Xasan Sh. ayaa sidoo kale sheegay in uu san is badali mowqifka Madasha ee ku saab san doorashooyinka, "waxaan rabnaa in dalka an ay ka dhacdo doorasho waqtigeeda ku dha cda heshiisna lagu yahay waxaana aaminsanh ay in la gaari karo haddii talooyinka aan soo je edineyno la raaco” ayuu hadalkiisa ku daray.
Ugu dambeyn waxa uu bogaadiyey natiijooy inkii lagu gaaray shirarkii dhawaan ka dhacay M/Dhuusamareeb waxaana uu ku baaqay in la ballaariyo watashiyada siyaasadeed ee hadda socda kuwaas oo uu tilmaamay in lagu gaari karo natiijo wax ku ool ah.
Mid ka mid ah wasiiradda la hadal haa yo in Farmaajo u xulan doono ra’iisul wasaaraha.
Eng. Abdullahi Ali Hassan, Wasiirka wasaara dda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumad dii codka kalsoonida lagala noqday ayaa si we yn loo hadal hayaa in uu noqon doono shaqs iga madaxweyne Farmaajo u xulan doono ra’I isul wasaaraha XFS
Warar lagu kalasoon yahay ay aa xaqiijinaa ya in shaqsiyaadka ugu cad cad ee la hadal ha ayo uu kow ka yahay Eng.Abdullahi Ali Hass an, oo mudo sanad ah hayay xilka wa siirka<